Keeniyaa keessa gandi jiraattonni dubartoota qofaa jiraachuu quba qabduu? - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Fayyaa fi Jaalala Fayyaa fi Hawaasa Keeniyaa keessa gandi jiraattonni dubartoota qofaa jiraachuu quba qabduu?
Laga gama, asuma biyya ollaa Keeniyaa, ganda dubartoonni qofti keessa jiraatantu jira. Gandi Umojaa jedhamu kuni , bara 1990 hundeeffame, kan dubartoonni itti baqataniifi doohanno itti argataniidha. Kan baqatan dhiirsaafi worra dhiiraa irraa. Dubartoonni baqatu kanniin hacuuccaa, dhiittaafi hubaatiin sadarkaa adda addaa dhiirri nurraan gayu baadhachuu dadhabne jedhaniidha.
Ganda Umojaa kana keessa dubartoonni jiraatan, baay’een isaanii gosa Samburuu irraa kan ta’an, hundi worra dhiiraa irraa himannaafi xiiqii garagaraa qabaniidha. Himannaan isaanii gudeeddii, ijoollummatti heerumuu, kittaannii, hubaatii qaamaa, sammuufi rakkoo biroos ufkeessatti ammata. Miidhaa nurra gaye jedhaniif dhiira irrati tankaarfii fudhachuufi haloo bayuu hindandeenne. Fala kan jedhan ganda ol’antummaa dhiiraa kamuu irraa wolaba ta’e uumachuudha. Kana godhutti kan milkaayan fakkaata.
Jiraattonni ykn dubartoonni ganda Umojaa hedduun isaanii ijoollee heddu qabu. Kophaa jiraataa ijoollee kana hunda eessaa fidaniin gaafii hundaati? Jiraattonni ganada Umojaa argaa dhiiraa kan jibban dhiirri ganda Umojaa keessa jiraachuufi guyyaafachuudha. Aduun dhiinaan ganda qoreen haxirame keessa huhulluuqaafi asiifi achi qaqaxxaamuraa kan bulan worra dhiiraati. Dhiirri tokko hanga dubartii 5’tti ulfeessutu himama.
Previous articleObaamaan yeroo Finfinnee daawwatetti hoteelaaf Birrii miliyoona 8 oli baasii godhe
Next articleBaqattoonni Itoophiyaa seeraan ala Keeniyaa keessatti argaman jedhaman 78 hidhaa baatii 3’n adabaman